श्रीमतीलाई त्रिशुली नदीमा ख’सालेर श्रीमानले गरे ड’रलाग्दो ह’त्या ! मृ’तक सञ्जुकी दिदीले खोलिन रहस्य (हेर्नुस् भिडियो) – " सुलभ खबर "
६ महिनाअघि मात्रै विवाह गरेको केही समय नबित्दै नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा नवविवाहित युवती मृ’,,त भेटिएकी छिन् । विदुर नगरपालिका वडा नं. १ ढुंगे बजार २१ वर्षीय सञ्जु खातीले बुधवार राति त्रिशुलीमा हा’म फा’,ले,की थिईन् । युवतीको मृ,,’त्यु भएपछि प्रहरीले सोही स्थानमा अचेत अवस्थामा फेला परेका उनका पतिलाई प’,क्रा,,उ गरेको छ । विदुर नगरपालिका ढुंगेबजारस्थित खोलासँगै जोडिएको एक चार तले घरको बरन्डाबाट त्रिशुलीमा हा’म फा’लेकी सञ्जुको नदीसँगको बगरमा ब’जा,रि,,एर मृ,,’त्यु भएको प्रहरीले अनुमान गरेको छ ।
स्थानियका अनुसार पनि उनको ह’त्या नै भएको हुनसक्ने जिकिर गरेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका प्रमुखका अनुसार चारतला माथिबाट हाम फाल्दा बगरमा ठो’कि,ए,र मृ’त्यु भएको देखिएको र घ’ट,ना बारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ । घ’ट,ना,बा,रे थप जानकारी र अध्ययनका लागि महिलाको श’व पो’स्टमा’र्टमका लागि पठाइएको जनाईएको छ। घ’टना बारे बिस्तृतमा तलको भिडियोमा हेर्नुस् :